Himalaya Dainik » व्रतमा किन खाइन्छ सिधे नुन ?
ब्रतको आ–आफ्नै विधी विधान छन् । व्रतका केही प्रकार छन् । कतिपय व्रतमा अन्न, पानी सेवन गरिदैन भने, कतिपय व्रतमा अन्न मात्र त्याग्ने गरिन्छ । व्रतको क्रममा सिधे नुन भने सेवन गरिन्छ र यो आफैमा फाइदाजनक पनि मानिन्छ । व्रतमा किन सिधे नुन खान हुन्छ ?
अन्य फाइदा- पाचन पक्रियाका लागि सबैभन्दा उपयोगी मानिन्छ, सिधे नुन । यसका साथै प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउनका लागि पनि यो नुन उपयोगी हुन्छ । सिधे नुनले हाम्रो शरीरमा इलेक्ट्रोलाइट्सलाई सन्तुलित राख्छ, जसले व्रतको क्रममा हामीलाई उर्जा दिन्छ ।